🥇Bathengisi beGolide abaGqwesileyo 2021 | Isikhokelo saSimahla sokuThengisa!
Abarhwebi abaGqibeleleyo beGolide be2021
Igolide isondele ngokwaneleyo ukuba ibambe eyayo, ngokwexabiso, kwiminyaka engamawaka amabini anesiqingatha edluleyo. Ngapha koko, isuntswana linye legolide belinokukusondeza ngokwaneleyo ngesixa esilinganayo sesonka njengoko ibiya kuba njalo ngelo xesha!
Uninzi lwethu luye lwacinga ngokufumana ubutyebi begolide obutshintsha ubomi. Iqonga 'lemfiva yegolide' yeefilimu ezinje ngeNdyebo yeSierra Madre zizigidi zeekhilomitha kude nokuthengisa igolide kwi-intanethi. Nangona kunjalo, iifilimu ezinje zisifundise isifundo sokuziphatha malunga nokungabi namrhaba-ukugcina itsheki kwiimvakalelo zethu zorhwebo.
Ukuba unqwenela ukuba 'yigolide yegolide', ugxile kwigolide njengenxalenye yesicwangciso-qhinga sakho sokurhweba-ke uza kwindawo elungileyo. Ukufikelela kwiimarike, kuya kufuneka ufumane umrhwebi olungileyo.
Nangona kunjalo, ngamakhulu onokukhetha kuwo -ukufumana iqonga elifanelekileyo lokurhweba akukho lula. Unoko engqondweni-sidibene nesikhokelo sokukhetha abarhwebi abathembekileyo begolide kwindawo ekwi-intanethi ngoku.
Ngaphakathi kwayo, siya kugubungela yonke into ukusuka kwindlela ixabiso legolide elibalwe ngayo kwindlela le mpahla ekhangayo ithengiswa ngayo. Xa sele sikuqhelanise neziseko ze ukurhweba ngegolide, siza kusebenzisa amacebo aluncedo kwaye emva koko sigqibe ngokuxoxa ngeebrokhwe zethu ezi-5 eziphezulu zokurhweba ngegolide ekufuneka siziqwalasele.
Izinto ezisisiseko zorhwebo ngegolide
Ukurhweba, ngohlobo lwayo olulula, kukuthenga nokuthengisa ngethemba lokwenza inzuzo. Ngamafutshane, isiseko sokurhweba ngegolide ngolu hlobo lulandelayo:
Ukuchaneka ngokuchanekileyo ukuba ixabiso legolide liya kunyuka okanye lihle
Ngethemba, xela ngokuchanekileyo
Thengisa igolide ngaphezulu kokuthenga kwakho
Kule mihla, ukuba ufuna ukubandakanyeka kwigolide, uya kuba nakho ukurhweba nge-Intanethi.
Xa uthengisa igolide kwintuthuzelo yekhaya lakho, kusafuneka ujonge ezo mvakalelo zinamandla - ukubawa, uloyiko kunye nokuqiniseka. Emva kwayo yonke loo nto, uyakube usenza izigqibo ezibalulekileyo ezichaphazela iinjongo zakho zokuphela, ke kubalulekile ukuba ugcine iimvakalelo zakho ziphantsi kolawulo.
Xa uthengisa igolide kwi-Intanethi, uya kuba nakho ukurhweba ngayo kwixesha elifutshane- njenge urhwebo usuku umzekelo. Ukuthengisa ngemini ngegolide kuhlala kubandakanya ukugcina indawo ivulekile kwimicimbi yemizuzu okanye iiyure.
Ukuba ufuna ukurhweba ngegolide ixesha elincinci ngaphezulu kosuku olunye, unokuzama Ukuguqula ukurhweba, oya kuthi ubone urhwebo lwakho lwegolide lubanjelwe ukuvulwa iiveki endaweni yoko. Siza kuhamba ngeziseko zeendlela onokuthengisa ngazo igolide kamva.
Ngaphandle kwamathandabuzo eyona ndlela ithandwayo yokuthengisa igolide kukusebenzisa iiCFDs- ezikwenza ukuba uthengise ngayo, ngaphandle kokuba ubenempahla yakho yokwenyani. Ukuba kunjalo, ufuna ukurhweba ngegolide ixesha elide-kuya kufuneka ujikeleze ii-CFD zegolide kunye nemirhumo yazo.
Yintoni eqhuba iindleko zegolide?
Ixabiso lezona zinto zininzi lixhomekeke 'kubonelelo nakwimfuno'. Ithetha ukuba ixabiso olicatshulweyo liya kuxhomekeka kubudlelwane phakathi kwenani labathengi begolide abafuna ukulithenga- kunye nenani leasethi abathengisi bayo (umzekelo) abathengisayo, ngamaxabiso ahlukeneyo.
Njengoko besesitshilo, igolide sele ithengisiwe ngaphezulu kweminyaka engama-2,000 XNUMX. Ithathelwa ingqalelo yomelele, ke ihlala isetyenziswa njengenxalenye yesicwangciso-nkqubo sokurhweba ukuzikhusela ngokuchasene nokunyuka kwamaxabiso kunye nokungaqiniseki kwezoqoqosho.
Ixabiso legolide litshintsha kaninzi ngemini kwaye liya kutshintsha-tshintsha okwesibini. Into enomdla kukuba, ngenxa yokuba abathengisi abaninzi begxalathelana ukuya kwigolide ngamaxesha okungaqiniseki kwezoqoqosho - ngamaxesha apho intengiso ithathwa njengephilileyo - ixabiso legolide lihlala lihla.
Libalwa njani ixabiso leGolide?
Ixabiso legolide lihlala lilinganiswa kusetyenziswa iidola zaseMelika, okanye enye imali enkulu. Xa kuziwa kubunzima kwiyunithi nganye, kuxhomekeke kwintengiso yentengiso. Ngokubanzi, igolide iya kuboniswa ngeegram, ii-ounces okanye iikhilogram.
Sichaze ukuba igolide ihlala icatshulwa kwi-USD. Isizathu emva koku kukuba i-USD yeyona mali ifunwayo kwihlabathi liphela. Uya kuqaphela ezinye iiklasi zeeasethi ezinje ngezinto ezithile zorhwebo kunye nesitokhwe ziya kuhlala zikhona kunokuba kucatshulwe kwi-USD.
Ngale nto ithethwayo, ayinamsebenzi ukuba ufaka kwenye imali, njengoko umrhwebi wakho omrhweba ngegolide eza kuguqula ngokulula kwindawo yorhwebo. Oku kuthetha ukuba wakuba uyifakile kwiakhawunti yakho, ungarhweba ngegolide ukusuka kwangoko.
Ivula nini iMarike yeGolide yeHlabathi?
Intengiso yentengiso yegolide yehlabathi iyaqhubeka ivulekele ishishini- ngu-24/7. Ukuba ucinga ngale ndlela, i-90% yegolide yehlabathi ithengiswa ngeemarike zekamva zase-US, iShanghai Gold Exchange (SGE), okanye imakethi ye-OTC yaseLondon, enye intengiso ithengiswa kwiimarike ezincinci. Apho enye intengiso iya kuvalwa, enye iya kuvulwa.
Uya kufumanisa ukuba abathengisi begolide abahlukeneyo banokubonelela ngokufikelela kwiimarike ezahlukeneyo, ke unokukwazi ukurhweba ngegolide iintsuku ezintlanu ngeveki ngeqonga lakho elithile. Umzekelo, kwimeko ye-eToro, ungarhweba nge-asethi phakathi kwe-5 kusasa ngoMvulo nangoLwesihlanu ngo-12 pm-ngekhefu eliqhelekileyo kusuku lokuthengisa phakathi kwe-10.30 pm kunye ne-11 kusasa yonke imihla.
Ndingathengisa njani ngeGolide?
Ngoku sele sicacisile ukuba yintoni ukurhweba ngegolide, ukuba isebenza njani kwaye ixabiso layo libalwa njani - masikhe sijonge kwiindlela ezahlukeneyo onokuzithengisa ngazo kwi-Intanethi.
Ukuthengiswa kwegolide: iiCFD
Ukurhweba ngegolide kusetyenziswa 'iikhontrakthi zomahluko' (ii-CFDs) kuthathwa njengeyona ntengiso iphambili xa kufikwa ekuthengiseni nge-Intanethi. Ukuba uyasithanda isandi sokukwazi ukuthenga nokuthengisa igolide, ngaphandle kokuthatha ubunini bempahla ebonakalayo-ke ukurhweba ngegolide ngeCFD kunokuba kukulungele.
Makhe sicacise kancinci. Njengoko besesitshilo, awunayo iasethi ebonakalayo xa uthengisa igolide ngohlobo lweCFDs. Endaweni yoko, ii-CFD zegolide zilandelela ukuhla kwexabiso leasethi- kule meko yegolide. Indima yakho kukubeka ngokuchanekileyo iodolo esekwe kwixabiso legolide eliya phezulu okanye ezantsi- kwaye sisivumelwano phakathi kwakho nomrhwebi wakho.
Masikunike umzekelo wezinto ezisisiseko xa kufikwa kuthengiso lwegolide lweeCFD:
Ixabiso legolide lenyuke ukusuka kwi-1,902.22 ukuya kwi-1,909.21
Eli xabiso liphezulu limela ukwanda kwe-0.36%
I-CFD yegolide iya kubonisa oku kwanda
Ukuba ixabiso legolide liyehla ngexabiso nge-0.18% -igolide yakho ye-CFD iyakubeka oku
Ngokubhekiselele kwii-CFD zegolide, uya kufumanisa ukuba uninzi lwabarhwebi aluyi kuhlawulisa kakhulu ngendlela yeefizi zekhomishini- ukuba kukho nantoni na. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa sifumanisa ukuba amaqonga orhwebo ahlala enikezela abathengi ukusasazeka okuqinileyo kolu hlobo lweasethi, singasathethi ke ngokunyusa.
Kwimeko apho ungazi, ubungakanani bukwenza ukuba urhwebe igolide ngezibonda ezikhulu kunokuba ubunokwazi. Ithelekiswa nemali mboleko evela kumthengisi wakho ekuvumela ukuba urhwebe ngetyala. Ngale nto ithethwayo, ngenxa yothintelo lwe-ESMA e-UK naseYurophu, uya kufakwa kwi-1: 20 (ngamanye amaxesha iboniswe njenge-20x).
Ukubeka ngokulula oku kuthetha ukuba unokurhweba namaxesha angama-20 kwisibonda sakho. Umzekelo, isibonda sakho se- £ 100 sinokuba yi- £ 2,000 xa usebenzisa isibonelelo sakho sobuninzi kwezorhwebo zegolide. Xa ukurhweba ngegolide ngeCFDs unokubakho uzuze xa ixabiso lisiwa. Oku kunokufezekiswa 'ngokufutshane'.
Sidibanise omnye umzekelo olula wentengiso yegolide yeCFD:
Masithi umthengisi uxabisa igolide kwi-1,909.21 yeedola nge-oz nganye
Nangona kunjalo, ucinga ukuba ixabiso liza kwehla kwiiyure ezimbalwa ixesha
Ugqiba ekubeni ubeke i-odolo ye-1,500 yeedola
Uqikelelo lwakho lwaluchanekile- ixabiso lehla ngegolide nge-2%
Ukusuka kwi-oda yakho ye- $ 1,500 yokuthengisa, wenze inzuzo nge-30
Ukuba ukhethe ukusebenzisa i-1: 20 yokunyusa enikezelwa ngumrhwebi wegolide ekuthethwa ngaye, inzuzo yakho ye- $ 30 ibinokuphakanyiselwa kwi- $ 600. Nangona kunjalo, asinakucinezeleka ngokwaneleyo ukuba kufanelekile ukusebenzisa ubungakanani ngononophelo. Ngelixa kunokuphucula amanqanaba akho enzuzo, inokuqinisa nokuzuza kwakho.
Ukuthengisa ngegolide: Iinketho
Uninzi lwabantu abathengisa igolide ngeCFDs, nangona kunjalo, zikho ezinye iindlela ezimbalwa onokwazi ukufikelela kuzo ngentsimbi exabisekileyo. Omnye umzekelo ukwimo yokhetho. Ngamafutshane, 'ikhontrakthi' yokukhetha iya kuhlala inomhla wokuphelelwa.
Ukuba uyakholelwa ukuba ixabiso legolide liza kunyuka, ungathenga ukhetho 'lokufowuna' - oku kukuvumela ukuba uthenge iasethi ngexabiso elithile (ngaphakathi kwexesha elimiselweyo).
Nanku umzekelo wokhetho lwegolide:
Uthenga iinketho zokufowuna ngomhla wokuphelelwa kweenyanga ezi-3
Ixabiso lentengo $ 1,800 nge-oz nganye
Oku kuthetha ukuba ucinga ukuba ixabiso legolide lidlula i-1,800 yeedola kwi okanye ngaphambi kokuba kuphele iikhontrakthi
Ukufikelela kwimarike, kuya kufuneka uhlawule 'i-premium' ngaphambili. Kule meko, yi-5% yexabiso lesivumelwano.
Oku kufikelela kwi- $ 90 ngekontraki nganye (iipesenti ezintlanu zeedola ezili-5)
Okwangoku, inye kuphela yezinto ezimbini ezinokwenzeka. Ukuba igolide ingaphezulu kwexabiso lesitrayikhi, ungasebenzisa ilungelo lakho lokuthenga i-asethi ngexabiso elithile.
Umzekelo, ukuba ikhontrakthi iphela xa igolide ixabisa i-2,000 yeedola nge-oz, wenza i-200 yeedola kuqhakamshelwano ngalunye olugcinayo ($ 2,000 engaphantsi kweedola le-1,800 yexabiso). Ukuba igolide ayigqithi kwi- $ 1,800, emva koko uphulukana nepremiyamu yakho. Kwakhona, oku kufikelela kwi-90 yeedola kwisivumelwano ngasinye osibambayo.
Kwelinye icala, ukuba ucinga ukuba ixabiso legolide liza kuhla ngaphambi kokuba ikhontrakthi iphele, ungathenga ukhetho 'lokubeka'. Oku kusebenza ngendlela efanayo nomzekelo ongentla, nangona kunjalo, ubuyela umva.
Ukuthengiswa kwegolide: Ixesha elizayo
Ikamva leGolide libonakalise ukufana okuninzi kwii-CFDs-ekubeni unakho ukuhamba ixesha elide kwaye lifutshane, kunye nokufaka isicelo amandla. Nangona kunjalo, ngokuchaseneyo, ikamva legolide liza nomhla wokuphelelwa. Ngokungafaniyo nokukhetha, une uxanduva Ukuthenga iasethi esezantsi ukuba ikamva liphelile kwaye usenazo iikhontrakthi. Kwiimeko ezininzi, ikamva liya kuhlawulwa ngemali ezinkozo- ke awudingi ukuba nexhala malunga nokufumana ilori-umthwalo weebarion zebhola ekhayeni lakho!
Ukucaca, ezi khontrakthi zihlala zihlala zijikeleza iinyanga ezi-3 ngexesha. Wakuba ufike umhla wokuphelelwa kwekhontrakthi kuya kufuneka uyithenge okanye uyithengise- kuxhomekeke kwindlela oyicingileyo. Okufana neenketho, ikamva lihlala liza nexabiso lesitrayikhi. Kwiphepha le-flip, azikho iipremiyamu xa urhweba ngekamva, ngaphandle kokuba ufake isicelo kufuneka ubambe isixa esikhulu ukufikelela kwiimarike.
Ukuthengiswa kwegolide: I-Forex
Indlela elungileyo yokuthintela ukonyuka kwamaxabiso kunye nokungaqiniseki kwezoqoqosho kukurhweba ngegolide ngokuchasene nemali efana nedola yaseMelika.
Nantsi indlela eya kuboniswa ngayo eso sibini: XAU / USD.
Ngamaxesha oxinzelelo lwe-geopolotiki okanye njengoko besitshilo ukunyuka kwamaxabiso- igolide ikholisa ukunyuka ngexabiso. Kananjalo, ukhuselekile ngakwidola ebuthathaka, kuba uhlawule ngaphezulu ngokurhangqa.
Ukuthengiswa kwegolide: ii-ETFs
Xa utyala imali kwii-ETF zegolide ungathenga igolide, kodwa ngendlela engathanga ngqo. Ukukunika umzekelo okhawulezayo wendlela onokuthenga ngayo igolide nge-ETF, nceda ubone apha ngezantsi.
Ufuna ukuthenga igolide
Ungathenga okanye uthengise izabelo VanEck Vectors Gold Miners ETF kwintengiselwano yebhanki NYSE
Le ETF ibeka iliso kwi-Arca Gold Miners Index
Ngoku unokufikelela kwezinye zeefemu ezinkulu zemigodi yegolide kolu shishino, kwihlabathi jikelele
Oku kunokufezekiswa ngaphandle kokuba ufuna ukugcina okanye ukuhambisa igolide uqobo. Endaweni yoko, le ndima igcinelwe umboneleli we-ETF. Xa usebenzisa iqonga le-newbie-friendly njenge-eToro, ungathenga i-ETF engentla ngotyalo-mali oluncinci lwe- $ 50- kwi-100% yasimahla.
Izicwangciso ezithathu ezithandwayo zokurhweba ngegolide
Unomdla ekuthengiseni igolide kwi-intanethi kodwa ungaqinisekanga ukuba ungaqala phi? Apha ngezantsi uzakufumana ezintathu zegolide ezithandwayo izicwangciso zorhwebo ezithandwa ngabatyali mali bazo zonke iintlobo nobukhulu.
Ukurhweba ngeGold Swing
Ukurhweba ngokujikeleza kwegolide kubandakanya ukulandela imeko ebanzi. Ngokwesiqhelo, oku kwenziwa ngokusebenzisa uhlalutyo lobuchwephesha ukuqikelela uluvo lweemarike. Xa umfutho wegolide womelele, uya kuba ujonge ukubamba ngempumelelo inzuzo kwindawo 'yokuthenga'.
Unokugcina indawo yakho ivulekile naphi na ukusuka kwiintsuku-ukuya kwiiveki ngexesha. Xa kubonakala ngathi umkhwa sele uza kuhamba ngenye indlela, uya kubeka urhwebo oluchaseneyo. Kulo mzekelo, oko kuya kuthetha ukubhatala indawo yakho ende kwaye ungene kumyalelo wokuthengisa.
Ngamafutshane, amanqanaba enkxaso 'ngamanqanaba amaxabiso', abonisa inkxaso kunye nokumelana kwimarike. La manqanaba aluncedo ekuvezeni amathuba orhwebo. Umzekelo, 'inqanaba lokumisa' linokwenziwa xa amava egolide ethe ukwehla. Oku kukumisa ixabiso leasethi eliwela phambili.
Isicwangciso esithandwayo kukungena kwintengiso ngaphezulu komgca wenkxaso, ngelixa ubeka 'i-stop-loss' order ezantsi komgca wenkxaso. Oku kukuvumela ukuba urhwebe ngendlela enobungozi.
I-Scalping sisicwangciso esithandwayo phakathi kwabarhwebi begolide abazabalazela ukuzuza ngokuthozama-rhoqo Abahwebi bathambekele ekuvuleleni bathenge kwaye bathengise izikhundla ngemini enye kwaye baphumelele kwiimeko zentengiso ezingazinzanga.
Ngokukodwa, xa igolide ithengisa phakathi kwamanani amaxabiso exesha elide, oku kuvumela abathengisi ukuba 'benze isikhumba' ngeniso ngalo lonke ixesha uluhlu lukhona.
Iimpawu eziphambili: Ukufumana uMrhwebi oPhambili weGolide
Xa ujonga umrhwebi ohamba phambili wegolide kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzikhumbule. Sidwelise izinto esicinga ukuba zezona metric zibalulekileyo apha ngezantsi
Ngelixa oku kubonakala kucacile, iifizi zinokutya ngokulula nakweyiphi na inzuzo enokubakho. Abanye abathengisi bahlawulisa kangange- $ 15 ngentengiselwano nganye-ke, kule meko, uya kuhlawuliswa ama-30 eedola ngokuvula nje nokuvala isikhundla.
Eyona ndlela ixhaphakileyo yokuba abarhwebi babize iifizi zekhomishini yipesenti yorhwebo. Umzekelo, unokuhlawuliswa iipesenti ezi-2, ke ukuba isigxina sakho sasiyi- $ 100, ungabhatala i- $ 2 ngalo rhwebo. Iindaba ezimnandi zezokuba -abarhwebi abaninzi banikezela abathengi ikhomishini zero xa bethengisa ii-CFD zegolide. Ngapha koko, kunjalo nangazo zonke iindawo zokurhweba ngegolide ezikwiqondo eliphezulu ezidweliswe kweli phepha!
Enye imali ekufuneka uyijongile yimali yokuhlawula imali ngobusuku. Ukuba usebenzisa amandla kwaye ugcine isikhundla sivulekile ubusuku bonke, uya kuhlawuliswa inzala yonke imihla xa urhwebo luvulekile. Nokuba yimali yokuhlawula imali ubusuku bonke, ikhomishini okanye iindleko zokungathengisi ngokusebenzayo-kuya kufuneka usoloko ujonga itafile yentlawulo kwiqonga lokuthengisa ngaphambi kokuba ubhalise.
Kubaluleke kakhulu ukuba ufumane iqonga lakho olikhethileyo lokurhweba ngokulula ukuhamba - ngakumbi ukuba ungumrhwebi wegolide omtsha. Ukuba newebhusayithi enobunzima obugqithisileyo kuya kukubhidekisa yonke inkqubo, kwaye ngokungathandabuzekiyo kunciphise inqanaba onokufunda ngalo ngeentambo. Amaqonga okurhweba anje ngeZakhono enza ukuba ukurhweba kube lula kakhulu, kulula ukufumana iasethi yokurhweba, kwaye kulula kakhulu ukubeka iodolo.
Njengoko unokuba uqokelele, bonke abathengisi bahlukile. Zonke ziyahluka ngokubhekisele kwimirhumo, ukusasazeka, iiasethi, iimarike- kunjalo ke nakwiindlela zokuhlawula ezamkelweyo.
Ukuba unokwazi ukuxhasa ngemali iakhawunti yakho yorhwebo ngokuthi, Mastercard- kuya kufuneka uqiniseke ukuba iqonga lokurhweba onomdla kulo liyayamkela loo ndlela yokuhlawula. Uya kufumanisa ngokubanzi ukuba abarhwebi abathengisa ngegolide abagqwesileyo bavumela iidiphozithi ngedebhithi / ngekhadi letyala, ii-e-wallets kunye nokudluliselwa kwebhanki.
Xa ukhetha oyena mrhwebi wegolide ubalaseleyo kwi-Intanethi, sicebisa kakhulu ukuba usayine ubambe ilayisenisi evela kwi-FCA okanye kwelinye iqumrhu elilawulayo elihloniphekileyo.
Oku kuqinisekisa ukuba uyakwazi ukuthenga nokuthengisa izixhobo zegolide kwindawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo. Ukuba umrhwebi wakho omkhethileyo akalawulwa- okanye unelayisensi enomzimba okrokrelayo, kuya kufuneka uyiphephe.
The sasaza Umahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa ngegolide (okanye nayiphi na impahla oyithengisayo). Abanye abathengisi banikezela ngokusasazeka okuqinileyo, ngelixa abanye bengakhuphisani.
Umzekelo, iZakhono zinika ukhuphiswano olusasazekayo lwama-600 iipipi xa kuthengiswa ii-CFD zegolide. Ukuqina kokunwenwa, kokukhona kulunge ngakumbi kwiingeniso zakho.
Iingcebiso ngeGolide yokuRhweba
Ukurhweba ngegolide kwi-Intanethi kunokuba ngumceli mngeni omkhulu ukuba awazi kakuhle into oyenzayo. Ukuba usandula ukufika kule meko, jonga ezi ngcebiso zidweliswe apha ngezantsi!
Funda iincwadi zokuThengiswa kweGolide
Kukho iimfumba zeencwadi ezijolise kurhwebo ngegolide, kwaye ngokwenza ukhangelo olulula lwe-intanethi uya kufumana ezona ncwadi zihlelwe ngolu hlobo.
Ngamnye kubo, kodwa ukuba ungathanda ukufunda ungafumana ukubambeka kwincwadi yorhwebo yegolide indlela eluncedo yokuzifundisa emarikeni.
Ukuba ukhetha ukufumaneka kwencwadi yedijithali, zininzi iincwadi zomsindo ezifumanekayo kurhwebo lwegolide. Abanye abathengi banokhetho olukhulu lweevidiyo zemfundo kunye nezinto zokufunda nazo.
Gcina ngokungahambelani neendaba zeGolide zamva nje
Ubukhulu becala ngenxa yobudlelwane bokwenyuka kwamaxabiso, ezopolitiko kunye neendaba zoqoqosho ezinegolide, kusengqiqweni ukugcina iindaba zamva nje. Njengoko kukhankanyiwe apha ngasentla, ungasebenzisa i-intanethi ukuze ufumane inzuzo apha. Baninzi ababoneleli abanikezela ngeendaba zakutshanje zezezimali, ngexesha lokwenyani.
Sebenzisa imiqondiso yokuthengisa ngegolide
Le miqondiso ibonelela abathengisi abangenalo ixesha lokuzigcina benolwazi ngeendaba zemali-okanye abatsha kurhwebo- 'thenga' kwaye 'uthengise' imiqondiso yeasethi efanelekileyo. Beka ngokulula - xa usebenzisa imiqondiso yokurhweba ufumana iingcebiso zokukucebisa ngendawo enokubanenzuzo.
Kuxhomekeke kuwe ukuba awuthengi okanye awuthengi, njl. Nangona ufunda 2 imiqondiso yorhwebo egxile kwimarike ye-forex kunye ne-cryptocurrency, yenza amaxesha ngamaxesha sidibana kwindawo yegolide xa kuvela ithuba lokwenza inzuzo.
Abanye abarhwebi, abanjengo-eToro, banika abathengi ithuba lokukopa urhwebo lomtyalomali ophumeleleyo noqinisekisiweyo ngokupheleleyo. Ngokutyala imali encinci njenge- $ 200 ungabonisa iphothifoliyo yomtyali mali enerekhodi eqinisekisiweyo.
Oku kuthetha ukuba ukuba umtyali-mali ukopa iindawo 'zokuthenga' ezilingana ne-0.8% yeepotifoliyo zabo, i-0.8% yepotifoliyo yakho iya kubonisa oku. Kukho iimfumba zabathengisi bekopi abanokuzijonga kwaye unokufikelela kulwazi olunxulumene nerekhodi zabo zomkhondo.
Urhwebo ngeGolide ngePhepha Imali
Sebenzisa iiakhawunti zedemo yeyona ndlela isebenzayo yokwenza a) ukufunda ngeentambo zokurhweba ngegolide, kunye b) nokuziqhelanisa neendlela zokurhweba ngaphandle kokubeka imali yakho emngciphekweni.
Sebenzisa iSakhono njengomzekelo-iqonga libonelela abathengi ngeakhawunti yasimahla engagubungeli kuphela ii-CFD zegolide, kodwa amaxabiso abonisa imeko zentengiso yokwenyani.
Abarhwebi abaGqibeleleyo beGolide
Ngoku uyazi konke ukuba uyazi malunga nokuthengisa ngegolide, kuya kufuneka ufumane umthengisi olungileyo ukuze enze ii-odolo zakho zentengiso. Njengoko siqaphele kwesi sikhokelo, xa ujonga iqonga lokurhweba kufuneka uqiniseke ukuba banokubonelela ngokufikelela kwiimarike zegolide onomdla kuzo.
Emva kwayo yonke loo nto, ayingabo bonke abathengisi abanikezela ngeeasethi ezifanayo kunye neemarike. Sibeke ndawonye uluhlu lwabarhwebi abathengisa kakhulu igolide e-UK ngeli xesha, ukuze uqwalasele.
1. I-AVATrade-Trade Gold CFDs kunye noKhuphiswano oluSasazekayo
I-AvaTrade liqonga lokurhweba elihloniphekileyo elinika abathengi ii-CFD zegolide kunye nokusasazeka okuqinileyo -njengezinye iindidi zeCFDs ngendlela ye-forex kunye ne-cryptocurrensets.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa kwabo bathanda ukuthenga nokuthengisa igolide ekuhambeni kukho isicelo se-AvaTrade 'AvaTradeGO'. Oku kuthetha ukuba ungabeka iiodolo zorhwebo kwaye uxhase iakhawunti yakho naphi na apho ufikelela khona kwi-intanethi.
Kunye nokuhambelana kwe-MT4-le broker ikwabonelela abathengi ngeakhawunti yasimahla yokurhweba ngegolide eziza nemali yephepha. Iiakhawunti zedemo zibaluleke kakhulu ekuncedeni ii-newbies zifunde iintambo, kwaye abathengisi abanamava bazama iindlela ezintsha. Ungaqala nge-CFD yegolide ukusuka kwi- $ 100 encinci.
Idipozithi efanelekileyo ye-100 yeedola
Ukuphakama kwe-1: 20 kwintengiso yegolide
2. I-Capital.com -Ukusasaza uKhuphiswano kunye noRhwebo oluSimahla lweGolide
I-Capital.com inamaphepha-mvume avela kwi-FCA, CySEC, ASIC, kunye ne-NBRB. Oku kuthetha ukuba usebenzisana ne-broker ethembekileyo nelawulwa ngokupheleleyo. Iqonga lokurhweba linika abathengi ukurhweba ngaphandle kwekhomishini kwiintlobo ngeentlobo zee-asethi.
Ii-asethi ze-CFD ezinokurhweba ziquka i-forex, i-indices, i-stocks kunye neempahla ezifana negolide. Ngelixa usasazo lukhuphisana kakhulu kwi-Capital.com, kubalulekile ukuqaphela ukuba nayiphi na i-avareji enikelweyo iya kubanjwa ngo-1:20 xa kuthengiswa igolide ngokwemida ye-ESMA.
I-Capital.com yamkela iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula ezinje ngamakhadi etyala / okuthenga, ukuhanjiswa ngocingo, kunye ne-e-wallets ezinje ngeSkrill. Elona xabiso lincinci olifunayo ukuze uqale ukurhweba ngegolide lixabiso elifanelekileyo le- $ 20.
Ukurhweba ngegolide nge-zero-commission
Ukhuphiswano kakhulu lusasazeka
I-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB ilawulwa
Vula iAkhawunti kunye noMthengisi weGolide ngoku
Ngaba ukulungele ukuqala ukurhweba ngegolide kwi-intanethi ngoku? Ukuba kunjalo, ngokulandela amanyathelo achazwe apha ngezantsi unokurhweba ngegolide kwimizuzu nje embalwa!
Inyathelo lokuqala-Bhalisela ukurhweba ngeGolide
Masicinge ukuba ukhethe umrhwebi oza kubhalisa naye. Okokuqala, kufuneka ubhekise kwindawo yokurhweba kwaye ucofe 'sayina'.
Emva koko, kuya kufuneka ufake igama lakho elipheleleyo, idilesi yokuhlala, i-imeyile kunye nenombolo yefowuni. Emva kwexesha uyakucelwa ifoto ecacileyo yesazisi sakho, ngokwemithetho ye-KYC enyanzeliswa ngabalawuli abanjenge-FCA kunye neCySEC.
Okulandelayo, kuya kufuneka ukongeza imali kwiakhawunti yakho entsha yorhwebo ngegolide. Oku kulula kakhulu-kufuneka ufake nje isixa onqwenela ukusifaka kwaye ukhethe indlela yokubhatala kuluhlu olwehlayo lweenketho ezamkelweyo.
Kuxhomekeke kwindlela ocinga ukuba ixabiso legolide liya kuhamba- ngoku unokwenza iodolo efanelekileyo yesikhundla sakho.
Sisoloko sicebisa ukurhweba ngemali encinci ukuqala okanye ukuzama idemo kwiiveki ezimbalwa. Ngokwenza njalo, uya kuthintela ukutshisa ibhalansi yeakhawunti yakho ngaphambi kokuba ube nethuba lokufunda ukuba zisebenza njani iimarike zegolide.
Isinyathelo sokuqala sokukhaba-ukuqala i-adventure yakho yegolide kukuqonda kweemarike. Inyathelo elilandelayo kukufumana eyona broker yokurhweba ilungileyo yokwenza iiodolo zakho, kwaye ikunike ukufikelela kwiimarike zehlabathi.
Ngokufunda isikhokelo sethu ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, kuya kufuneka uzive uzithembile malunga nendlela ekuthengiswa ngayo le asethi engamanzi- yiyo loo nto ukulungele ukukhetha iqonga lokurhweba ngegolide. Zonke iifemu zabarhwebi esizibhalileyo zinelayisensi, ngenxa yoko zilawulwa ngokupheleleyo kukhuseleko lwakho.
Okokugqibela, ungaze ulijongele phantsi ixabiso lokuthatha ithuba kwiakhawunti yedemo. Abarhwebi abatsha banokufunda okuninzi ngokukhululeka ukwenza iimpazamo- ngaphandle kokulahlekelwa yimali yokwenene apha endleleni.
Ndiyakwazi ukutyala imali kwimivalo yegolide?
Ewe unakho ukuba negolide ebonakalayo, kodwa ayicetyiswa. Ingakumbi kwabo bangafuni kutyala imali eninzi. Ukunqongophala kweemfuno zokugcina, iifizi eziphantsi kunye neendleko zeinshurensi ezisezantsi zenza ukuba iiCFD zibe lukhetho olungcono kubathengisi abaninzi.
Ngaba ndinokurhweba ngegolide kunye nomgangatho?
Ewe ungarhweba ngegolide usebenzisa amandla. Uninzi lwabarhwebi luya kubonelela abathengi kangangoko njenge-1: 20 yokunyusa kwi-CFD yegolide
Ndingaluqhelisela njani urhwebo lwegolide?
Ungaqhelanisa ngokulula nokuthengisa igolide usebenzisa iakhawunti yedemo. Abarhwebi abanjengo Skilling banikezela abathengi iakhawunti yeedemo yasimahla eza kuqala ilayishwe 'ngemali yephepha' (imali yedemo).
Yimalini endiyifunayo ukuqala ukuthengisa igolide?
Oku kuxhomekeke kumrhwebi omkhethileyo. Uninzi lwamaqonga orhwebo achaza ubuncinci idiphozithi, kwaye emva koko abe nesabelo esincinci.
Ngaba ndiyakwazi ukuthengisa igolide kwi-Intanethi?
Ewe. Akuzange kube lula kubantu ukuba bathengise igolide kwi-intanethi. Ngokukhetha umrhwebi olawulwayo onje ngeZakhono okanye i-eToro- uyazi ukuba ujongene nenkampani esemthethweni.